'लुट' का निर्माता नक्कली नोटसहित पक्राउ, सिक्वेलमा वाग्ले कै कथा ! | Citizen Post News
'लुट' का निर्माता नक्कली नोटसहित पक्राउ, सिक्वेलमा वाग्ले कै कथा !
२०७५ जेष्ठ २ गते २०:५१
काठमाडौँ । जुन बेला लुट फिल्म बाहिरियो । त्यसपछि फिल्मको चर्चा एकाएक उकासियो । फिल्म हिट पनि भयो । सोही फिल्म हेरेर लुटेराको एक समूहले राजधानीको एक प्रतिष्ठित बैंक लुट्न सफल भएको पक्राउ परेपछि बयान समेत दिए । अझ लुटेरा समूहका नाइकेले २६ पटकसम्म लुट फिल्म हेरेपछि बैंक लुट्ने योजना बुनेको समेत बतायो ।
आज सोही फिल्मका निर्माता तथा वितरण माधव वाग्लेसहित ६ जना नक्कली नोट प्रकरणमा पक्राउ परेका छन् । फिल्म प्रयोजनका लागि छापिएको नक्कली नोट बजारमा चलाउन थालेपछि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले उनीसहित ६ जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो । काठमाडौँको विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ परेका उनीहरुको साथबाट प्रहरीले दुई करोड ६० लाख ६३ हजार रुपैयाँसमेत बरामद गरेको छ ।
प्रहरीले फिल्म निर्माता वाग्लेको कोठामा छापा मारेर दुई करोड ५२ लाख बराबरको नक्कली रुपैयाँ बरामद गरेको हो । बरामद गरिएको सबै नोट हजारको भएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले बताए । चारढुङ्गेस्थित प्रिनसेस मुभिज प्रालिका सञ्चालक रहेका वाग्ले चलचित्र लुट, लुट–२, छड्के, रेशम फिलिलीलगायत चलचित्रका निर्माता तथा वितरकसमेत हुन् ।
प्रहरीले वाग्लेसहित महेन्द्र वोगटी, सुजित तामाङ, साजन तामाङ, प्रकाश सुवेदी, विकेश नापितलाई पनि पक्राउ गरेर आज सार्वजनिक गरेको हो । फिल्म प्रयोजनका लागि छापिएको नक्कली नोट विभिन्न च्यानलमार्फत बजार चलाउन थालेपछि उनीहरु अनुसन्धानको घेरामा परेका थिए । वाग्लेले भने सो नक्कली नोट फिल्मको सुटिङका लागि छापेको बताएका छन् ।
उनको कोठाबाट बरामद गरिएका केही नोटमा ‘फिल्म प्रयोजनका लागि’ भनेर समेत लेखिएको पाइएता पनि नोट छाप्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने तथा छापिएको नोटमा नक्कली लेखिएको हुनुपर्ने प्रहरीको भनाई छ । नक्कली नोट छापेको तथा बजारमा चलाएको अभियोग प्रमाणित भएको खण्डमा १० वर्षसम्म कैद सजायको ब्यवस्था छ । लुट फिल्मका निर्माता वाग्लेको पक्राउसँगै अब उनकै बास्तविक कथामा लुट फिल्मको अर्को सिक्वेल बन्ने संभावना छ ।
प्रहरीले यसरी पायो नक्कली नोटको सुराकः
काठमाडौँको नयाँ बसपार्कमा सुमधुर क्याफे तथा खाजा घर छ, जसको सञ्चालक बाबुराम कँडेल हुन् । एक दिन उक्त क्याफेमा सुर्खेतका महेन्द्र बोगटी खाजा खान आइपुग्छन् । खाजा खाएपछि उनले दिएको पैसा कँडेललाई नक्कली भएजस्तो लागेपछि उनले तत्काल नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्छन् । खाजा खाएको बिल दुई हजार तिरेर हिँडेका बोगटीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी केरकार गरेपछि उनको साथबाट एक लाख २० हजार नगद बरामद हुन्छ ।
बोगटीले दिएको सूचनाकै आधारमा जेठ १ गते विहान सुजित तामाङ, साजन तामाङलाई लुभुुबाट नक्कली नोट सात लाख ४३ हजारसहित फेरी नियन्त्रणमा पर्छन् । पक्राउ परेका तीनै जनाको बयानपछि प्रहरीले प्रिनसेस मुभिज प्रालिका सञ्चालक माधवराज वाग्लेको कोठामा खानतलासी गर्दा दुई करोड ५२ लाख बरामद हुन्छ । पक्राउ परेका सवैलाई परिसरले पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थालेको छ । फोटोः मिडिया फाइल